ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Led Strips (IP20)
21-07-23 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Strip light market တစ်ခုလုံးအတွက်လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းယှဉ်ပြိုင်မှုသည်အလွန်အားကောင်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Strip Light တွင်အသုံးပြုမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မှ ...
Strip light market တစ်ခုလုံးအတွက်လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းယှဉ်ပြိုင်မှုသည်အလွန်အားကောင်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အစင်းကြောင်းအလင်း၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိပါတယ် ...
Lamp belt သည် voltage low belt နှင့်သမားရိုးကျ light belt တို့အားခွဲခြားထားသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအလင်းရောင်ခါးပတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ သွယ်ဝိုက်အလင်းရောင်မျက်နှာကျက်၏သွယ်ဝိုက်အလင်းအရင်းအမြစ်၊ ကက်ဘိနက်အောက်ရှိဖြည့်စွက်သောအလင်းအရင်းအမြစ်၊ ကက်ဘိနက်ရှိထပ်ဆောင်းအလင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အလှဆင်ထားသောအလင်းအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ...
ရွေးချယ်ခြင်းစွမ်းရည်နှင့် LED အလင်းခါးပတ်၏တပ်ဆင်ခြင်း
အလှဆင်သည့်အခါအလှဆင်စာရင်းတွင် ဦး ဆောင်သောအလင်းရောင်တီးဝိုင်းရှိသည်ကိုများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသော်လည်းပိုင်ရှင်အများစုက၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာမသိရှိကြပါ။ တကယ်တော့ဒီဟာအရမ်းပုံမှန်ပါပဲ။ ပထမ ဦး စွာအဆက်အသွယ်အများကြီးမရှိ။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ အလင်းရောင်ခါးပတ်သည်လျှို့ဝှက်ထားသဖြင့်၎င်း၏အလင်းကိုသာမြင်ရသော်လည်း၎င်း၏အရိပ်ကိုမမြင်နိုင်ပါ။ အတွင်း ...
၁၂၃ ကြိမ်မြောက် Canton Fair အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်
Joineonlux သည် LED strips များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုကိုအာရုံစိုက်သည်။ နိုင်ငံခြားသားဖောက်သည်များထံမှချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးကျယ်ပြန့်စွာအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဆိုင်ခန်းများသည်အလွန်သွက်လက်။ ဆူညံပြီးဆူညံနေသည်။ ဖောက်သည်အများစုသည်ပြခန်းတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပြောကြသည်။
Zhongshan Joyeonlux သည် ၁၇ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်အညီနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အစဉ်မပြတ်လိုက်ဖက်သည်။ မှတ်သားသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အရည်အသွေးတို့၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Joyeonlux သည်ဖောက်သည်များအားမတူညီသောပစ္စည်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
20-07-21 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
၁။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော LED light strip ကို FPC နှင့် SMD LED တို့ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ သို့မှသာထုတ်ကုန်၏အထူသည်အကြွေစေ့၏အထူသာဖြစ်ပြီးနေရာလွတ်မယူနိုင်တော့ပေ။ အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်များတွင် 30cm အရှည်ရှိ LED ၁၈ ခု၊ LED ၂၄ ခုနှင့် LED ၁၅ ခု၊ LED ၂၄ ခုနှင့် 50c LED ရှိ ၃၀ ပါဝင်သည်။
LED light belt ၏တပ်ဆင်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည်ဘာလဲ
LED အလင်းခါးပတ်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်မှတ်ချက် - LED light belt ၏ဝါယာကြိုးနည်းလမ်း။ LED light belt ၏ယေဘူယျ voltage သည် DC 12V ဖြစ်သောကြောင့် power supply ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ power supply ၏အရွယ်အစားသည် LED light belt ၏ power နှင့် connection အရှည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Mono ၏ဝါယာကြိုး ...
LED light belt ၏ရွေးချယ်ခြင်းသည် installation ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် light ပေါ်တွင်မူတည်သည်
high-voltage light belt နှင့် low-voltage light belt တို့၏ကွာခြားချက်မှာ high-voltage light belt သည်ယေဘုယျအားဖြင့် 50/100 m roll ဖြစ်ပြီး၊ voltage light belt သည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၅ မီတာ roll ဖြစ်ပြီး high-voltage light belt သည်ရေစိုခံနိမ့်သည်။ အလင်းခါးပတ်ရေစိုခံသို့မဟုတ်မ, ဆီမီးခွက် ...